Ahoana ny fomba hanarenana ny fizahan-tany miaraka amin'ny politika misy? Tsy azo atao ve ny iraka?
Home » Lahatsoratra farany farany » malaza ankehitriny » Ahoana ny fomba hanarenana ny fizahan-tany miaraka amin'ny politika misy? Tsy azo atao ve ny iraka?
Associations News • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Interviews • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • malaza ankehitriny • WTN
Fanarenana ny dia lavitra aorian'ny Covid-19 no fanontaniana napetraky ny mpanolo-tsaina alakamisy Max Haberstroh.
Mahatsapa fiheverana izy hahazoana toerana matanjaka aorian'ny areti-mandringana no lakilen'ny fanarenana.
Ny fiatraikany ara-tsosialy sy ara-koltoraly, tontolo iainana ary toekarena amin'ny tsena loharano sy kendrena ary na ny fiarahamonin'izy ireo na (mpampiantrano) sy mpitsidika (mety);
Ny fizahana ny fizahan-tany sy fizahan-tany, ny halehiben'ny maha-zava-dehibe azy io ho an'ny toerana misy antsika, ary ny fifamatoran'ny fizahan-tany miaraka amin'ireo sehatra sy indostria mifandraika amin'izany;
Fanitsiana ny rafitra politika mba hampiroboroboana ny Travel & fizahan-tany amin'ny maha-indostrian'ny serivisy miavaka azy, ary hahazo tombony amin'ny fizahantany ho toy ny 'fitaovam-pifandraisana', mba hanatsarana ny marika elo sy ny endrik'ilay toerana / toerana itodiana amin'ny fitambarany - toerana iray miaina, miasa, mampiasa vola ary mivezivezy.
Ny Travel & fizahan-tany dia indostria natokana hanatanterahana ny nofinofy, izay mitarika ny fanirian'ny olona amin'ny làlana malalaka amin'ny fitsangatsanganana, mankafy fialamboly sy fialamboly, fanatanjahan-tena sy fitsangatsanganana, zavakanto sy kolontsaina, fomba fijery sy fomba fijery vaovao. Moa ve tsy fananana manan-danja izay mahatonga ny ain'ny olombelona ho mendrika kokoa azy io? Moa ve ny Travel & fizahan-tany, noho izany, tsy mahazo feo laharana voalohany amin'ny dingana eo an-toerana, isam-paritra, nasionaly ary manerantany miaro ny zon'olombelona sy mamporisika ny adidin'ny olombelona?
Amin'ny fotoanan'ny fanodinkodinana, plagiarism, vaovao sandoka, famaritana vahoaka, ary fitenenana fankahalana virtoaly, ny fizahan-tany dia manome ny dingana ho an'ny famoronana, mampipoitra ny voajanahary sy ny madio, ny zavakanto ary ny zava-misongadina miavaka amin'ny lova maneran-tany sy ny 'Disney'-aingam-panahy tontolon'ny 'tanana faharoa'. Tsy ilaina intsony ny manala devoly ny artifisialy mihitsy: Na izany aza, tsy manao tsinontsinona ny artifisialy, mikendry ny "tena izy" ny fizahan-tany - ary fantatsika fa ny fahamendrehana, izany hoe ny fahatsapana fa tsy voafitaka, dia azo tanterahina amin'ny "marina 'tontolon'ny artifice izay aingam-panahy avy amin'ny fo - sy' art ', ary noho izany dia natokana ho an'ny filamatra mahazatra an'ny' Marina, ny Tsara sy ny Tsara '.
Na dia mizarazara ho 'trondro vaventy' an'arivony sy orinasa tsy miankina madinidinika (SME) an-tapitrisany sy andrim-panjakana aza, ny Travel & fizahan-tany dia mirehareha amin'ny maha-indostria lehibe indrindra azy eran'izao tontolo izao - entin'ny idealy ary manolo-tena hanompo manome traikefa amin'ny dia mahafinaritra. Ankoatr'izay, ny fizahantany aza dia mihevitra ny tenany ho indostrian'ny fandriam-pahalemana voalohany. Fantatry ny olona ivelan'ny sehatra ve izany? Tonga eo amin'io fiheverana ambony io ve ny Travel & fizahan-tany?
Ny fahitana ny fitetezana izao tontolo izao indray mandeha dia nandrisika an'i Thomas Cook hikarakara ny fitsidihana fonosana voalohany. Taonjato maro taty aoriana, ny fahitana ny fivezivezena malalaka namakivaky ny sisin-tany dia nanjary ny vector nipoitra ny fihetsiketsehana Alatsinainy Atsinanana. Miaraka amin'ireo mpitondra eran-tany tia fahalalahana, ny 'iraky ny olona tsy azo atao' amin'ny farany dia mitarika tsy misy hafa noho ny fanonganana ny fitondrana kominista mpampijaly sy ny fianjeran'ny rindrina mahatalanjona! Fihodinana re izany! Ny iray karazana dia sarotra averina.
Ho setrin'izany, toa nipoitra indray ireo lamina taloha: Eny tokoa, niova tamin'ny Ady mangatsiaka ho amin'ny fandriampahalemana mangatsiaka isika, fantatsika tsara fa tsy fitaovam-piadiana fotsiny io. Izany ve no tadiavintsika?
Aorian'ny fianjeran'ny rindrina, misy ny vintana sy ny fika azo atao toy ny fanentanana amin'ny vanim-potoana, vonona ny horaisina. Rava ny Firaisana Sovietika, nikorontana i Russia, kanefa ny filoha Yeltsin, mpanararaotra, dia naneho ny tenany matanjaka hisorohana ny fanonganam-panjakana. Folo taona taty aoriana dia nandimby an'i Putin, mpandimby azy, izay mazàna tsy noheverina ho “demokratika tsy misy kilema” (na eo aza ny tombana maika navoakan'ny chancelior Schröder teo aloha), dia niresaka tamin'ny Bundestag Alemanina ary nankafizin'ny antoko rehetra. Nofoanana ny Pact Warsaw, fa ny OTAN, maniry ny hamotsotra ireo Eoropeana Atsinanana amin'ny nofy ratsy 'fandrahonana Rosiana', dia naka fotoana mialoha sy nanitatra atsinanana. Nahatsapa ho voahitsaka i Russia, ary ny fanentanana azy mitombo ho tena ao Eropa dia tsy noraharahaina. Ny fikambanan'ny tandrefana dia nampiseho tanjon-tafika saingy tsy nahita fahitana politika. Androany, raha tokony hanome nofo ny fanahy tany am-boalohany ny fiaraha-miasa Eoropeana-Rosiana, dia tsara kokoa ny mitandrina ny amin'ny fanitarana Rosiana.
Fotoana kely tsy nahitam-bokatra tamin'ny fiandohan'ny taona 1990 mba 'hisaharana ny tontolo vaovao be herim-po': hanokatra an'i Russia ho any Eropa sy Andrefana ary hanary ireo fitaovan'ny Ady mangatsiaka lo ao anaty firafitra ara-politika misy poizina misy azy ireo. "Efa lany andro ny OTAN" - zava-dehibe ve izany, satria Trump fotsiny no nilaza an'izany? -
Inona no fotoana tsy azon'ny mpitondra fahitana eo amin'ny sehatry ny fanjakana, ny governemanta ary ny orinasa ambony hanehoana fahitana mialoha sy hafanam-po ary hiteny? Fotoana tsy nahomby tamin'ny Travel & fizahan-tany, indostrian'ny fandriam-pahalemana lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, handao ny tilikambo ivory ho an'ny mpiombon'antoka aminy ary hanao azy ho toy ny jiro fanaovan-jiro iraisampirenena: handefa antso amin'ny fiaraha-miasa matotra, hanelanelana ny fihaonan'ny sehatra iraisam-pirenena an'ny mpanapa-kevitra lehibe, mandrindra hetsika ara-tsosialy sy ara-kolontsaina, manampy amin'ny fanamafisana orina ny fifampitokisana sy fahatokisan-tena ary mandefa hafatra mafonja momba ny fandriam-pahalemana amin'ny alàlan'ny fizahan-tany amin'ireo olona mikorontana?
Indrisy, lasa ny fotoana ara-politika an'ity karazana ity, ary nolavina na tsy henoina ireo hevitra hamoronana fiovana mankany amin'ny tsara kokoa.
“Tany am-piandohana no teny”: Misy ny ezaka amin'izao fotoana izao - indraindray tsy isalasalana fa toa izy ireo - ny fanovana anarana hoe: Raha mifantoka amin'ny 'resonance' ny fifantohana, ny fikambananan'ny Travel & fizahan-tany dia tokony hampiditra an'io hevitra io, manatsara ny famononany sy ny fahitan'izy ireo hatrany amin'ny ambaratonga 'catalista fiaraha-monina' kokoa, fa tsy hitazomana ny fiandranandran'izy ireo ho toy ny mpamaky resaka, rehefa nandamina ny fiainany izy ireo Birao isan'andro sy ny famerana ny indostrian'ny sisan'izy ireo.
Izany dia mihoatra ny porofo iray hafa fotsiny fa ny mantra an'ny tompon'andraikitra fandraisam-bahiny sasany dia mifanipaka amin'ny tenany: "hitazona ny politika tsy hiala amin'ny fizahan-tany". Mety ho takatra izany raha jerena ny fandraisan'anjaran'ny fizahan-tany ny politika isan'andro: Ny fizahan-tany, raha te hihetsika malalaka kokoa, dia tokony hialana amin'ny corset of administrations public ary omena endrika lalàna tsy miankina iray hafa. Na izany aza, misy ny fifanoheran-kevitra lehibe raha toa ny Turismo voatondro ho mpilalao 'ivelan'ny politika' mihitsy.
Raha ny tena izy, ny UNWTO, WTTC, ary ireo fikambanana mitarika amin'ny Travel & fizahan-tany dia zara raha tsapan'ny besinimaro ho toy ny 'fanilo fanilo' an'ny True, the Beautiful, and the Good, izay natokana hiseho sy hanao zavatra mihoatra ny fetra fizahan-tany tenany sy ny manodidina azy.
Tokony hanomboka hanao an'izany izy ireo, raha jerena ireo fivoarana misy ankehitriny sy aorian'ny fivarotan'i Covid-19, ary manoloana ireo loza voajanahary sy fikorontanana ara-tsosialy. Tsy maintsy atao ny sehatry ny Travel & fizahan-tany miaraka amina hetsika miaraka amin'ny ekipa nasionaly sy iraisam-pirenena sy ekipa mpanohana ny Agenda UN 2030 ho an'ny fampandrosoana maharitra. Na izany aza, raha niara-nanao ny tsara sy ny fahaiza-manao teknika nitambatra izahay, dia saika tsy tratrantsika ny tanjona maripana 1,5 degre farany ambony napetrak'i 2040 sahady, toy ny, ohatra, ny antoko politika any Alemana, mba hiadiana amin'ny vokadratsin'ny trano fandraisam-bahiny. Noho izany, ankoatry ny fanamafisana ny ezaka ataontsika mba hisian'ny fiovan'ny toetrandro, dia tokony hanome ny anjarantsika hampiasa vola amin'ny ati-doha sy vola be amin'ny famolavolana fomba iray hiainana amin'ny fiovan'ny toetrandro. Ny fitadiavana vahaolana dia tena zava-dehibe amin'ny fitandroana ny fahalalahana, ny fiadanam-bahoaka ary ny fandriampahalemana. Tsy azo atao ve ny iraka? - Never Say Never!
Ny Travel & fizahan-tany, amin'ny maha-indostria fandriam-pahalemana isa-tokana azy, dia tsy afaka mangalatra ny tenany amin'ny fanoloran-tena sy andraikitra ara-politika - eo afovoan'ny afovoany ihany izy io, ary tokony hiezaka ny hitarika ny endrika ankapobeny sy ny hetsika ary ny vahaolana mamorona. , miaraka amin'ny andrim-panjakana, fikambanana ary orinasa mitovy hevitra aminy, toy ny sekoly sy oniversite, fikambanana sivily sy fiantrana, ny fitaterana / fivezivezena ary ireo sehatry ny angovo azo havaozina, fanesorana ny fako, fitantanana rano sy rano maloto, fiarovana sy fiarovana, fananganana sivily… Travel & Tokony hampiakatra ny lanjany ara-politika ny fizahan-tany mba hanomezana tolotra lehibe eo amin'ny sehatra sosialy sy ny tontolo iainana misy ny fiatraikany avo indrindra sy ny isa azo atao.
Ny andro eran-tany ho an'ny fanadiovana eran-tany, izay noraisina tsara tany Andrefana ary, amin'ny maha 'subbotnik' (fanadiovana ny 'sabotsy'), mahazatra any Rosia sy Eoropa Atsinanana, dia ho ohatra lavorary hanombohana azy, ho toy ny «fidirana voalohany» ho an'ny fankalazana ny Andro fizahan-tany manerantany 27 septambra.
Author Max Haberstroh, Mpanolo-tsaina momba ny fizahan-tany any Alemana, mpikambana ao amin'ny World Tourism Network
Fahamarinana mora azo dia lahatsoratra navoakan'i Max Haberstroh.